I-Fairmont Hot Springs Junior One-Bedroom Suite
(232 okushiwo abanye)
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Mountain View Suites
Itholakala e-Columbia Valley phakathi kwe-Purcell kanye ne-Rocky Mountains, ihhotela lethu e-Fairmont Hot Springs, BC iyindawo yokugcina yokubalekela. Indawo yethu ebanzi inokubukwa kwentaba okumangalisayo, inqwaba yezinsiza ezithokozisayo, kanye nendawo enhle eseduze nazo zonke izindawo ezikhangayo ezihamba phambili. Indawo ngayinye yethu engu-104 yesitayela se-suite inemibhede elingana nenkosi nezinsiza eziningi, okuvumela izivakashi zethu ukuthi ziphumule futhi zijabulele umoya omangalisayo. I-Junior One Bedroom Suites yethu ngayinye inendawo yokuhlala enethezekile negumbi lokulala elihlukile. Igumbi ngalinye e-Mountain View Villas lihlome ngekhishi eliwusayizi ophelele, imibhede yenkosi ewusayizi omncane, amasofa akhipha usayizi wendlovukazi, nama-balconi angasese noma amathala avumela izivakashi ukuthi zibuke ukubukwa kwentaba okumangalisayo.
Jabulela izinsiza eziningi ngesikhathi sokuhlala kwakho e-Mountain View Villas e-Fairmont Hot Springs! Okuphawuleka kakhulu, ipaki yethu yamanzi yangaphandle yesizini (evula ngoMeyi kuya kuSuku Lwezabasebenzi) iyindawo ekahle yokuchitha intambama nezingane, noma ukuphumula nokuphumuza umoya ngesikhathi sokuphumula kwezothando. Indawo yethu yokubhukuda enkulu kanye nendawo yobhavu oshisayo inendawo yokuphumula emibalabala elungele ukubukwa indawo enhle, kuyilapho ipaki yethu ye-splash, nemidlalo yayo ehlukahlukene nemisebenzi, izojabulisa izingane usuku lonke. Izivakashi ezifuna ukuhlala zimatasa ohambweni lwazo zingajabulela futhi ithenisi esendaweni yehhotela, i-volleyball, nenkundla ye-basketball enguhhafu.
4.38(232 okushiwo abanye)
4.38 out of 5 stars from 232 reviews
4.38 · 232 okushiwo abanye
Indawo yethu izungezwe indawo yokuhlala futhi iseduze neRiverside Golf Course, futhi ibanga elifushane nje ukuya eMountainside Golf Course. Sikumizuzu nje ukusuka e-Fairmont Hot Springs Pool. Kukhona inala yezindlela zokuhamba izintaba nezokuhamba ngebhayisikili endaweni eseduze.
Ibungazwe ngu-Mountain View Suites
Ideskithophu lethu Lokwamukela izivakashi livuliwe amahora angu-24 ngosuku, futhi kuhlale kukhona othintana nabo abezimo eziphuthumayo. Amalungu Ethimba LeDesk Lokwamukela Izivakashi akulungele ukunikeza izivakashi ulwazi nemihlahlandlela yendawo yangakithi.
Ideskithophu lethu Lokwamukela izivakashi livuliwe amahora angu-24 ngosuku, futhi kuhlale kukhona othintana nabo abezimo eziphuthumayo. Amalungu Ethimba LeDesk Lokwamukela Izivakas…